Plaxo Desktop Notifier - Fanavaozana avy amin'ny tamba-jotra | Martech Zone
Alarobia, Aprily 23, 2008 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Plaxo dia fitaovana nanampy tokoa somary ela ary mihatsara hatrany io. Herinandro vitsivitsy lasa izay dia nopetahako teo am-baravaran'ny fiara ny findaiko. Tonga lafatra izy io, nanaparitaka ny telefaona ho singa ara-batana 2. Nahazo telefaona vaovao (mahazo fiantohana foana!) Ny ampitso fa very ny bokiko adiresy.
Nanao fikarohana haingana ny Verizon's Applications aho ary nahita fa manana an'io i Plaxo. Nataoko izany ary afaka mampifandray ny findaiko amin'ny Plaxo amin'ny fifandraisana voafidiko aho. Namonjy ahy volana maro hamaliana antso tsy nahafantatra hoe iza any am-pita.
Tonga izao ny Plaxo Desktop Notifier
Rehefa olona mifandray amiko amin'ny twitter aho, mandefa amin'ny bilaogin'izy ireo, na manao fanovana maro hafa, dia mahazo fampandrenesana amin'ny birao aho. Hatramin'ny araho ho azy ao amin'ny Twitter, Twhirl tena be atao foana aho ary tena malahelo ireo bitsika sasany avy any ny tamba-jotra.
Na dia manana fifandraisana an-taonina amin'ny LinkedIn aza aho dia hitako izany Plaxo dia fananana betsaka kokoa noho ny ahy satria mitazona ny boky adiresy (sy telefaona) rehetra tsy hitahiry. Tsy mampaninona ahy ny mandoa ny serivisy. Ny sombin-tsaina mahalala fa mety ho very ny solosainako na ny findaiko ary mbola manana ny bokiko adiresy aho dia sombin-tsaina mendrika aloa!
Tags: miantso amin'ny asaantso ho amin'ny hetsikaclinkedcollabspottabilao collabspotgrapheffectLewis Howes
Ny media sosialy dia momba ny fanatanterahana